विवशता (कथा) | Shresthakedar's Blog
2012 -भक्त गुरुङ-, पुष-माघ महिनाको जाडो मौसम, म छटपटाई रहेको थिएँ ।मलाई पट्टक्कै निँद लागेको थिएन । नाडी घडीमा आखा दौडाएँ, रातको समय, विवशता साभार: mysansar, on March 10th
साभार: mysansar, on March 10th, 2012
रातको समय, पुष-माघ महिनाको जाडो मौसम, म छटपटाई रहेको थिएँ ।मलाई पट्टक्कै निँद लागेको थिएन । नाडी घडीमा आखा दौडाएँ बाह्र बज्न दश बाह्र मिनेट के बाँकी थियो,घर माथि सिमलको रुखमा हुंचिल कराई रहेको, स्यालहरु कराई रहेको र कुकुरहरु भुकी रहेको एकोहोरो आवाज मेरो कानमा परि रहेको थियो! म नजिकै, मेरी प्राण भन्दा प्यारी पत्नी स्वाँ स्वाँ निन्द्रामा थिइन् । लाग्थ्यो, म उनको साथमा रहंदा तिनलाई कुनै भय थिएन, न त त्रास चिन्ता नै …।पूर्ण संरक्षणको महशुस गरेकी थिइन् होली सायद; तिनले घोर निन्द्रामा पनि मलाई समाती रहेकी थिइन् ,मानौं , म अन्तै एक्लै रातमा नै बिलिन हुँदै छु!मलाई उनि प्रति मायाँ लाग्दछ ,दया अनि सहानुभूतिको बाढी नै आउँछ ,अनि म उनको सुकोमल मुहार हेरी रहन्छु , आखाँहरु रसाउँछन् ; आशुका थोपाहरु उनको गालामा तप्किन पुग्छन् म भावआवेशमा उनको निधारमा च्वाप्प म्वाई खान्छु !
मेरी प्यारीले मलाई लाखौ लाख बिन्ति गरेकी थिइन् । आँखाबाट आँशुका बलिन्द्र धारा पोखाएकी थिइन् । उनको त्यो नै अन्तिम हतियार थियो मलाई विदेश जान रोक्न …। म तीन बर्ष अघि वेलायती सैनिकमा भर्ति भएको थिएँ ! देशमा रोजगारी थिएन , १२-१३ हजार युबकको बीचबाट म १७० जनामा परेको थिएँ मलाई अतिनै हर्ष भएको थियो! यस साल म तीन महिनाको छुट्टीमा आएको थिएँ ! छुट्टी पुरा भई भोलि बिहानै मलाई घरबाट लाहुर तर्फ हिड्नु थियो ।उनलाई मैले छुट्टीमा आएको दस पन्ध्र दिनमा नै भित्र्याएको थिएँ ।साइनोले उनी मेरै मामाकी छोरी थिइन् !उनी रोइ कराई गरिन् ! मैले भविष्यको लागि भए पनि म जानु पर्छ ,दुइ चार पैसा कमाएर ल्याउला भनी उनको कोमल भावनालाई दबाएको थिएँ । केही सीप नलागी उनी थकित भई निन्द्रा देवीको शरणमा परेकी थिइन् !
म भोली बिहानै पल्टनमा हाजिरका लागि मेरा सेतै फुलेका बाबु आमा, साथी संगी , गाउँका चौतारा खेत अनि मेरी प्राण भन्दा प्यारी पत्नीलाइ छाडेर बिदेशी भूमिमा पुन: बन्दुक बोक्न जानु थियो। बिदेशी भूमिमा लड्नु थियो, रगत पोखाउनु थियो अनि एउटा भाडाको सिपाहीको रुपमा नाम कमाउनु थियो। मैले मेरी पत्नीलाइ जे जसरी सम्झाउने बहाना बनाए पनि आफ्नो गाउँ घर छाडेर जानु त मलाई पनि कहाँ मन थियो र? यसमा मेरो आफ्नै बाध्यता थियो ,विवशता थियो अनि समाजको एउटा “रित” थियो या परम्परा थियो भनौं ! केही पैसा कमाएर पल्ला घरे क्याप्टेनको भन्दा ठुलो घर बनाउनु थियो ! आफ्नो छोरा छोरी लाइ शहरको महँगो बोर्डिंग स्कूलमा दाखिल गर्नु थियो आदि इत्यादि सपनाहरु……….. थिए !
तिनले रुँदै बिन्ति गरेका कारुणिक शब्दहरु मेरो कानमा गुन्जी रहेका थिए । “…………….खै ! तीन बर्ष पछी त के हो ,के हो ? यु. के.मा त ठुला ठुला शहरहरु छन् भन्छन् , के भर ,न उतै तिर रमझममा डुबेर हाम्लाई भुल्नु हुन्छ कि! कति भन्दा पनि मान्नु हुन्न , आमा बाबा बुढा बुढी, डाँडा माथिका घाम जुन जस्ता कति पीर गर्लान ,बिचरा हरे! पैसा मात्रै ठुलो कुरा हो र ?!” मेरो मनमा, मुटुमा दिमागमा जोर संग घोच्यो दर्द भयो , मेरा आँखाहरु रसिला रही रहे। मैले उनलाई सम्झेको थिएँ ,”हेर मायाँ , जिन्दगि लामो छ, पैसा नभए कति हेला हुन्छ ,तिमीलाई थाहा छदैं छ ।केही गर्न पनि सक्दैनौं । त्यहाँ केही दु:ख गरे केही पैसा आउँछ ,केही सजिलो हुन्छ ,फेरी म मात्र पनि त होइन, कति छन् कति म फुल्याउँथें : मुटुमा भक्कानो फुटे पनि ओठमा मुस्कान छर्दै भन्थे ,”मा तिम्लाई सुनको चुरी ,माडवारी राम्रा राम्रा साडीहरु ल्याई दिउला नि, म आए पछी भुन्टे संगै डाँडाको जात्रामा घुम्न जाउँला नि “? हुन्न र!
म सुस्केरा हाल्छु ……..! म निदाई रहेकी मेरी पत्नीको मुहारमा एक टक हेरी रहन्छु ! मुहारमा निर्दोषपन ,भावुकता,सरलता प्रष्ट छरिएको देख्छु ।आह! प्रकृतिको सृस्टी कति अनौठो ,मायाँ प्रेम यी जालहरु कति अचम्म छ संसारमा ,प्रकृतिको नियम , अहो ! मा झस्कन्छु । पतिलाइ कति मायाँ गर्छिन् ,कति चाहन्छिन् । मेरो आखाँमा वाल्यकाल देखि युवास्थासम्मका सम्पूर्ण घटनाहरु मानसपटलमा यादको रुपमा फिल्ममा झैं उपस्थित हुन्छन् । केटाकेटी छँदा बेशीमा हजुर-बा र साथीहरु संग गोठालो गएको,माछा मार्न हिंडेको ,लुकामारी खेलेको आदि इत्यादी! तर अब त्यो समय कहिले फर्किएर आउँला !फेरी उमेर परिबर्तन संगै पूजा आजामा सोल्टिनीहरुसंग गफ गर्दै हिंडेको,दशैँ तिहारमा रोहोटे पिंग खेल्दै हिंडेको,दु:ख पाएर पढ्न नसकी “लाहुर” कै बाटो लग्नु परेको ,लाहुरमा, रकरुटमा गाली, लात्ती खानु परेको ,भाडाको सिपाही भई विभिन्न इलाकामा ,विभिन्न मुलुकमा गई लडाईं लडेको आदि! ओह ! कति विवशता एकातिर देशमा रोजगार नहुनु, बिदेशमा खुकुरीको धारमा हिंड्नु पर्ने! म झन्डै अर्धहोस भई सकेको हुन्छु ;पुन: ब्यूँझन्छु …………उही स्यालहरु ,कुकुरहरु अनि हूचिलको एकोहोरो आवाजले……………….।
तीन महिनामै आफ्नो गाउँबाट बिरानो हुनु पर्दा, अन्तरद्वंध भई रह्यो मनमा ,के गरौ,कसो गरौँ भक्कानो फुट्यो ,…………भर्खरै विवाह भएको ……..म आफैंलाइ धिकार्छु ,म आफ्नो विपन्नतालाइ र गरिवीलाइ धिक्कार्छु ! वाध्यता हो, विवशता हो! पत्नीको अनुहारमा पुन: नजर दौडाएँ ! मुहारमा उही निर्दोषपन कोमलता भावुकता …….!फेरी भावावेशमा उनको कोमल मुहारमा मैले मुलायम स्पर्श गरें अनि निर्दोष चुम्बन दिएँ ! आँखाबाट आँशुका थोपाहरु उनको मुहारमा तप् तप् चुहि रहे, मन पग्लिए ,मुटुमा बेदना रुपी पीडाको अनुभूति भयो। म जाग्राम बसेको थिएँ त्यो रात ,अर्धहोसमा त कहिले बेहोसमा ………..। बिहान चार बजे तिर भाले को डाँकोले बल्ल म तन्द्राबाट ब्युंझियें ।
मलाई थाहा छ ,त्यो रात,कति कष्ट प्रद भयो काट्न !घर छोड्न भोली बिहान मरेकै जुनी भएको थियो मलाई ।आमा बुढी मान्छेलाइ त झन् कति पिडा भयो होला! बाबा त अलि कठोर हुनुहुन्थ्यो। बिहानै आमाले भात पकाई सक्नु भएछ ।भातमा थोरै भैंसीको सुकुटी,छुलुलु हुने गरि लुरी गाईको घ्यु ,एक गिलास तीन पाने रक्सी, कति मिठो थियो त्यो खाना तर बिछोडको समयमा त्यसको के महत्व………..!आमा रुँदै केही बोल्न सक्नु भएको थिएन ! बाबा चाहिँ,” बाबु! दुश्मनलाई चाईने….हँ ……चट्टै छिनाउनु पर्छ ,गोली लागे पनि पिठ्युँमा नहोस छाती मै हुनु पर्छ नि है । हामी गोर्खालीलाइ पशुपति नाथले सदा दया गर्छन् ! तलाई पनि गरुन्, रक्षा गरुन्। ” आत्माबिश्वासका साथ, स्वर दह्रो बनाई भन्नु भएको थियो!मलाई अझै प्रष्ट याद आइ रहेको छ त्यस क्षण । त्यस्तै अहिले म यु.के. को मेल्ट्री हस्पिटलमा छु ! मन मनै भन्दै छु ……………..”बा ! बा!! मैले छिनाएँ, बा मैले छातीमा नै गोली थापें ….पिठ्युमा थापिन !
रुचि नरुचि खाना खाएँ । ड्रेस लगाएँ तयार भएँ साइतको लागि , आमा रोएको रोएकै हुनुहुन्थ्यो , बुबाले भन्नु भो,” साइत को बेलामा आँसुले छेक्नु हुन्न छोरालाइ खादा र टिका लगाएर हासेर बिदा गर्नु पर्छ , सासु बुहारी नरोउ ।” मायाँ आँखामा एक टक ले हेरी राखेकी थिइन् ।बाबा आमालाई हिंड्नु भन्दा अगाडी ढोगें। आशिर्बाद दिंदै हुनुहुन्थ्यो’,” बिसआसय आयू हुनु ,जमदार सुब्दार कप्तान हुनु ।” म घरमा बिदा लिइ हिंडे । मायाँ पनि पुर्याउन खोला वारी सम्म आईन् त्यहाँ पो बिछोड हुन ,हामी मा सार्है गार्हो परेको थियो…………..त्यो क्षण!
पल्टन मा हाजिर भएँ ! सात आठ रात सम्म त मलाई गाउँ घर परिवार कै झल्झली याद आई रहे ,एकान्तमा मात्र बस्न मन लाग्थ्यो। छाउनी मा न हो सबै केटा केटा मात्र …त्यहाँ जीवन र जगत ’bout गम्भीर कुराहरु केही सुन्न पाईंदैन ,खाली जोक्स त्यो पनि फोहरी फोहरी मात्र ,गीत तेस्तै गफ तेस्तै अनि दिउसो चाहिँ बन्दुक, गोली, अनावश्यक अनुशासन ……………।अत्यन्तै सम्झना आई रह्यो , चिट्ठी लेखें केही हल्का भयो। आफु पनि पल्टने त्यस्तै वातावरणमा रमाउन वाध्य भएँ ! विवश थिएँ!
केही दिन पश्चात नै हामीलाई संसारको एउटा विवादास्पद देश अफगानिस्थानमा डिप्लोय हुनुपर्ने भयो, नाटो फौज संग मिलेर तालिवानहरु संग लड्नु पर्ने हुन्थ्यो, थुप्रै सिपाहीहरुले बहादुरीका साथ लड्दा लड्दै बीरगति प्राप्त भएको समाचार पनि आईरहेको थियो.।नुन पानी खाए पछी “रुल एंड अर्डर” त मान्नु नै पर्छ !त्यो हाम्रो फौजी कर्तब्य नै थियो। एघार महिनाको कडा तालिम पश्चात् “बा- आमालाई पनि आफ्नो खिलाफमा आए छोड्ने छैनौं “भन्ने कसम खाएका थियौं । हामी त्यस्तो अन्जान क्षेत्रमा थियौं , न त हामी लाइ त्यहाको हावापानी थाहा थियो न त भाषा भेष भुषा, हामीले किन लड्ने भन्ने पनि थाहा थिएन ! कहिले अत्यन्त गर्मी त कहिले अत्यन्त जाडो मौषमले गर्दा हामी बिचलित भएका थियौं ! लडाईं देखा देखि थिएन , लडाईं लुकेर कसरि मार्ने र ज्यान जोगाउने थियो। म लगाएत साथीहरु पेट्रोलिंग गर्दै गई रहेका थियौं अकस्मात डाँडा माथि बाट फायर हुन थाल्यो। उताबाट गोलीको पर्रा छुटी रहेका थिए । हामी तल भएको हुनाले हामीलाई अफ्ठ्यारो भई रहेको थियो। म लगायत साथीहरु लड्दै गयौं कति साथी हरु गोली लागि ढल्दै थिए ,कोहि “आमा”भन्दै खुत्रुकै भएका थिए..! हो ,मलाई राम्ररी थाहा छ ,त्यसबेला जब हाम्रा साथीहरुका साथ लडाईंका फिल्डमा पुग्यौं ! सर्बप्रथमत: मलाई मेरा बाबा, आमा , पत्नी गाउँका सम्पूर्ण इष्ट मित्रहरु ,घर लहरा पहरा मनो मष्तिष्कमा रिंगियो ! अनि केही याद आएन ,एक पटक श्री पशुपति नाथसंग आफ्नो रक्षार्थ प्राथना गरें ! अनि अघि बढें ! कतिलाई च्वाट्टै छिनाएँ ! बिदेशीको लागि लडी रहेको थिएँ ,हाम्रो त अफगानीहरु संग त केही दुश्मनी पनि त थिएन ,त्यसकारण पनि आफुलाई अफसोच भई रहेको थियो ! मेरो जिउमा गोलीको पर्रा छुट्यो,मैले पहेंला पहेंला रंगी बिरंगी बाहेक केही देखिन, बेहोस भएछु!
वेहोशीबाट ब्यूँझदा आफुलाई ठुलो कोलाहलमा पाएँ , त्यो यु.के. को एउटा मिलिटरी हस्पिटलमा रहेछ । उठ्न खोजें ,उठ्न सकिन सम्पूर्ण शरीर सिथिल भएको रहेछ । मलाई आफु प्रति नै घृणा लाग्यो। आफ्नो हालत प्रति घृणा लागेर आयो……………….।
मलाई घर फर्कन त पट्टक्कै मन लागेन ,लागेर पो के गर्नु सिर्फ मेरा लास घरमा जानु थियो। मलाई आफु मर्ने भन्ने मा अफसोच थिएन ,तर अफसोच त केवल यसमा थिएँ कि, ती मेरी पत्नी लाउँ लाउँ खाउँ खाउँ भन्ने उमेरमा बिधुवा हुने र मेरा माता पिता बिचल्लीमा पर्ने ,गर्भमा रहेका बच्चा देख्न नपाउने । हाय !मेरो विवशता ! म बारम्बार केहि समय बचाई दिन भगवानसंग प्राणको भिख माग्दै थिएँ !
मलाई सकी नसकी मायाँलाइ चिट्ठी कोर्न मन लग्यो ,चिट्ठी कोर्ने सामर्थ्य केही थिएन । मायाँको मधुर आवाज कानमा गुन्जी रहयो । “………………..सहरको रम् झम् …………..हाम्लाई मायाँ नमार्नु नि है ………” मैले के के लेखेछु …..कागज पोको पारें अनि चिट्ठीको मुनि तिर घरमा पुर्याई दिनका लागि आग्रह गरें ।अचानक कलम खस्यो………आखाँ अगाडी भयंकर अन्धकार ब्याप्त भयो!
पछी डाक्टरको अथक परिश्रमको बाबजुद मलाई बचाउन त सफल भएछन् तर मेरो दुइ खुट्टा कहिले फिर्ता नहुने भए ! आजभोली म गाउँमा नै रिटायर्ड जीवन बिताएको छु।
आजकल देशको बाध्यता टुलुटुलु हेरी बसेको छु । विदेशिने प्रवृति हावी भएको छ। म चाहिँ आफ्नो छोरा छोरी ,आफन्तहरुलाई स्वदेशमा नै परिश्रम गर्न सल्लाह दिन्छु । बिदेशमा गरिने दु;ख स्वदेशमा गरेर देशको मुहार हँसाउने सर-सल्लाह दिन्छु । आफ्नो जीवनको दु;ख सुखलाई सम्झी रहन्छु ।
आँपको रूख »